Ukwesula emsebenzini | Law & More BV
Blog » Ukwesula
Ngaphansi kwezimo ezithile, ukunqanyulwa kwesivumelwano sokuqashwa, noma ukusula emsebenzini, kuyinto efiselekayo. Lokhu kungaba njalo uma izinhlangothi zombili zicabanga ukusula emsebenzini futhi zenze isivumelwano sokuyekiswa maqondana nalokhu. Ungafunda kabanzi mayelana nokuqedwa kwemvume ngokuvumelana kanye nangesivumelwano sokuqeda kusayithi lethu: Ukuxoshwa.site. Ngaphezu kwalokho, ukunqanyulwa kwesivumelwano sokuqashwa kungathathwa njengokufiselekayo uma ngabe elinye lamaqembu lidinga ukushiya phansi. Isibonelo, umqashwa angabona isidingo, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, ukunqamula inkontileka yokuqashwa ngokumelene nentando yelinye iqembu, umqashi. Umsebenzi unezinto eziningi angakhetha ukuzenza kulokhu: ukunqamula inkontileka yokuqashwa ngesaziso noma ayinqamule ngokufaka isicelo sokuhlakazwa enkantolo. Kuzona zozimbili lezi zimo, umqashwa kumele akhumbule imingcele ethile ebekwa yizindawo ezifanele kulezi zindlela zokwesula emsebenzini.
Ukuyekiswa kwesivumelwano sokuqashwa ngesaziso. Ukuyekiswa unilateral kwenkontileka yomsebenzi kubizwa nangokuthi ukuqedwa kwesaziso. Ingabe umsebenzi ukhetha le ndlela yokwesula? Bese umthetho unquma isikhathi somthetho okumele senziwe ngumsebenzi. Akunandaba ukuthi isikhathi sesivumelwano sithatha isikhathi esingakanani, lesi sikhathi sesaziso imvamisa siyinyanga eyodwa yomsebenzi. Amaqembu avunyelwe ukuphambuka kulesi sikhathi sesaziso esivumelwaneni sokuqashwa. Kodwa-ke, uma isikhathi esizogcinwa ngumsebenzi sandiswa, kufanele kubhekwe ukuqinisekisa ukuthi isikhathi asidluli umkhawulo wezinyanga eziyisithupha. Ngabe umsebenzi uyasigcina isikhathi okuvunyelwene ngaso? Uma kunjalo, ukunqanyulwa kuzokwenzeka ngasekupheleni kwenyanga kanti ukuqashwa kuzophela ngosuku lokugcina lwenyanga yekhalenda. Uma umsebenzi engathobeli isikhathi sesaziso okuvunyelwene ngaso, ukunqanyulwa kwesaziso akujwayelekile noma ngamanye amazwi unesibopho. Kuleso simo, isaziso sokuyekiswa ngumqashwa sizoqeda isivumelwano sokuqashwa. Kodwa-ke, umqashi akasakhokhi inkokhelo futhi umqashwa angakweleta isinxephezelo. Lesi sinxephezelo ngokuvamile siqukethe inani elilingana nomholo wengxenye yesikhathi sesaziso engazange ibonwe.
Ukuqedwa kwenkontileka yomsebenzi yinkantolo. Ngaphezu kokunqamula inkontileka yokuqashwa ngokunikeza isaziso, umsebenzi uhlala enethuba lokufaka isicelo enkantolo ukuze ahlakaze inkontileka yokuqashwa. Le nketho yesisebenzi ikakhulukazi enye indlela ukuxoshwa ngokushesha futhi ayikwazi ukukhishwa ngaphandle kwenkontileka. Ingabe isisebenzi sikhetha le ndlela yokuqeda? Ngemuva kwalokho kufanele afakazele isicelo sokuhlakazwa ngokubhala nangezizathu ezinamandla njengoba kushiwo ku-athikili 7: 679 noma ku-athikili 7: 685 isigaba 2 seDutch Civil Code. Izizathu ezisheshayo ngokuvamile ziqondwa njengezisho (izinguquko) ezimeni eziholela ekutheni umsebenzi angalindelwa ngokufanelekile ukuthi avumele inkontileka yomsebenzi iqhubeke. Ngabe izimo ezinjalo ziyasebenza futhi ngabe iNkantolo yesiFunda esincane iyasivumela isicelo somsebenzi? Kuleso simo, iNkantolo yesiFunda esingezansi ingasinqamula isivumelwano sokuqashwa ngokushesha noma ngemuva kwesikhathi, kepha hhayi ngemiphumela ebuyayo. Ingabe imbangela ephuthumayo ingenxa yenhloso noma iphutha lomqashi? Lapho-ke umsebenzi angafuna nesinxephezelo.
Ngabe umsebenzi unqume ukusula emsebenzini nokuqeda isivumelwano sokuqashwa nomqashi wakhe? Lapho-ke lokhu kuvame ukwenzeka ngokubhalwa phansi ngesaziso sokuyekiswa noma sokushiya emsebenzini. Encwadini enjalo kuyisiko ukusho igama lesisebenzi kanye nombonisi kanjalo nokuthi nokuthi umqashwa uyiqeda nini inkontileka yakhe. Ukugwema ukungezwani okungenasidingo nomqashi, kuyalulekwa ukuthi umsebenzi avale incwadi yakhe yokuyekiswa noma yokusula emsebenzini ngesicelo sokuqinisekiswa kokutholwa nokuthumela incwadi nge-imeyili noma ngeposi elibhalisiwe.
Kodwa-ke, ukukhokhelwa okubhaliwe kokuxoshwa akukhona okuphoqelekile futhi kuvame ukusebenzela izinhloso zokuphatha. Ngemuva kwakho konke, ukunqanyulwa isenzo somthetho esingenayo ifomu ngakho-ke futhi kungenziwa ngomlomo. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi umsebenzi azise umqashi wakhe ngamazwi kuphela engxoxweni yokuqedwa kwenkontileka yokuqashwa bese exoshwa. Kodwa-ke, indlela enjalo yokwesula inezithiyo eziningi, njengokungaqiniseki ngokuthi isikhathi sesaziso siqala nini. Ngaphezu kwalokho, alinikezi umsebenzi ilayisense lokuthi abuyele ezitatimendeni zakhe bese egwema kalula ukwesula emsebenzini.
Isibopho sokuphenya umqashi?
Ngabe isisebenzi siyasula? Umthetho wamacala ukhombisile ukuthi kuleso simo umqashi akakwazi ukumane athembele kalula noma ngokushesha okukhulu ukuthi yilokhu umsebenzi akufunayo empeleni. Ngokuvamile, kuyadingeka ukuthi izitatimende noma ukusebenza kwesisebenzi kukhombise ngokusobala nangokungaqondile inhloso yakhe yokuxosha. Kwesinye isikhathi kudingeka ukuqhubeka kophenyo lomqashi. Impela, esimweni sokuyeka umsebenzi ngomlomo, umqashi unesibopho sokuphenya, ngokusho kweNkantolo Ephakeme yaseDashi. Ngokwesisekelo sezici ezilandelayo, umqashi kufanele aqale aphenye ukuthi ngabe ukuxoshwa bekuyinhloso yomsebenzi wakhe yini:
Isimo somqondo womsebenzi
Izinga umqashwa abona ngalo imiphumela
Isikhathi okumele umqashwa abhekisise ngaso isinqumo sakhe
Lapho kuphendulwa umbuzo wokuthi ngabe umqashwa ubefuna ngempela yini ukuqeda umsebenzi, kusetshenziswa indinganiso eqinile. Uma, ngemuva kophenyo olwenziwe ngumqashi, kubonakala sengathi ukuxoshwa bekungeyona inhloso yomsebenzi noma empeleni, umqashi ngeke, ngokomthetho, aphikisane nomsebenzi. Impela hhayi lapho "ukuthatha" umsebenzi kungalimazi umqashi. Uma kunjalo, awukho umbuzo wokuxoshwa noma wokuqedwa kwesivumelwano sokuqashwa ngumqashwa.
Amaphuzu wokunaka uma kwenzeka wesula
Ngabe umsebenzi unqume ukuqhubeka nokusula emsebenzini? Ngemuva kwalokho futhi kuwukuhlakanipha ukunaka la maphuzu alandelayo:
Iholide. Kungenzeka ukuthi isisebenzi sinezinsuku eziningi zeholide ezitholakalayo. Ngabe isisebenzi sizoyichitha? Kuleso simo, umsebenzi angathatha izinsuku ezisele zeholide ngokubonisana noma akhokhelwe ngosuku lokuxoshwa. Ngabe umsebenzi ukhetha ukuthatha izinsuku zakhe zeholide? Lapho-ke umqashi kumele avume kulokhu. Umqashi anganqaba leli holide uma kunezizathu ezizwakalayo zokwenza kanjalo. Ngaphandle kwalokho umsebenzi uzokhokhelwa izinsuku zakhe zeholide. Inani eliza endaweni yalo lingatholakala ku-invoyisi yokugcina.
Izinzuzo. Umsebenzi onqanyulwe inkontileka yakhe yokuqashwa uzothembela kumthetho Womshwalense Wokungasebenzi ukuze aphile. Kodwa-ke, isizathu sokuthi kungani futhi nendlela isivumelwano sokuqashwa esanqanyulwa ngayo kuzothonya amathuba okufuna izinzuzo zokungasebenzi. Uma umsebenzi eshiya phansi umsebenzi, isisebenzi ngokuvamile asikho ilungelo lokuthola imihlomulo yokungasebenzi.
Ingabe ungumsebenzi futhi ufuna ukushiya phansi? Bese uxhumane Law & More. Kuzo Law & More siyaqonda ukuthi ukuxoshwa kungenye yezinyathelo ezifinyeleleka kakhulu emthethweni wokuqashwa futhi kunemiphumela efinyelela kude. Kungakho sithatha indlela yomuntu siqu futhi singahlola isimo sakho namathuba kanye nawe. Ungathola eminye imininingwane ngokuxoshwa kanye nezinsizakalo zethu kusayithi lethu: Ukuxoshwa.site.
Thumela Previous Izibophezelo zomqashi nezomqashwa ngokoMthetho Wezimo Zokusebenza